Alshabaab oo shaacisay magaca iyo beesha uu kasoo jeedo is-miidaamiyihii isku qarxiyey Barta Ceelgaab - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Alshabaab oo shaacisay magaca iyo beesha uu kasoo jeedo is-miidaamiyihii isku qarxiyey Barta Ceelgaab
Alshabaab ayaa shaacisay magaca iyo beesha uu kasoo jeedo ismiidaamiyihii isku qarxiyey barta laga ilaaliyo Madaxtooyadda Soomaaliya ee isgoyska Ceelgaab, Sabtidii 25 Septembar 2021.
Dardaaran laga sii duubay ninkan is-qarxiyey oo laga baahiyey warbaahinta Alshabaab ayuu ku sheegay in lagu magacaabo Maxamed Amiin Xaaji Xubbi loona yiqiin (Carafaat iyo Farxaan), isagoo Alshabaab uga biiray magaalada Muqdisho.
Is-miidaamiye Carafaat ayaa kasoo jeedaa magaalada Muqdisho, Wuxuuna u dhashay Beesha Shabeelle, gaar ahaan Reer Geedow, wuxuuna ahaa wiil dhalinyaro ah oo 20 sano jir ah.
Dardaarankiisa ayuu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo is-miidaamiyeyaasha Alshabaab; isagoo caddeeyay in Alshabaab oo dhan yihiin is-miidaamiyeyaal naftooda huraya.
Weerarka uu geystay ee is miidaaminta ahaa wuxuu galaaftay nolasha 9 qof oo ay kamid ahaayeen hooyo iyo laba caruur ahaa oo ay dhashay.
Previous articleMajaajiliistihii caanka ahaa ee Ajakis oo ku geeriyooday Magaalada Muqdisho
Next articleIska hor imaad lagu dilay Taliye ka tirsan Ciidamada Booliska Somaliland oo ka dhacay..